Camp Odayin - Somali | Camp Odayin
Camp Odayin – Somali
Camp Odayin waxay ku caan baxday inay tahay meel amaanka, cayaaraha iyo xumaan la’aan oo loogu talogalay caruurta wadnaha ka xanuunsan, sikastoo dhaqaalohodu yahay. Kaamkayagu wuxuu caruurtan diyaar ula yahay fursad inay xoojiyaan kalsoonida ay ku qabaan naftooda, inay helaan isku filnaansho, inay bartaan xirfado cusub, iyo inay la kulmaan dhalinyaro kale oo ay isaga mid yihiin xag caafimaad, niyad iyo bulshonimaba.
Can Odayin waxay u shaqaysaa dadka dhan ayadoo aan loo fiirineyn jinsiyad, midab, aaminsanaan, diin, wadankuu ka imaaday, lab ama dhedig ahaan, ama awoodiisa dhaqaale.
Camp Odayin waxay haysaa meelo samarka loo tago kaam ahaan isla markaana leh meel la dego oo loogu talo galay caruurta wadnaha ka jiran. Caruurtu waxay helayaan inay banaanka u baxaan ayna helaan jimicsi iyo waxyaabo horumarinaya jirkooda iyo maskaxdoodaba. Waxaana la soconaya dad u tababaran xaga caafimaadka. Camp Odayin waa halka Kaam oo loogu talo galay caruurta wadnaha ka jiran oo ku taala gobolada la isku yiraahdo Midwest. Uma suurtowdo in badan oo kamida caruurta noocaan ah inay ka qayb qaataan kaamyada samarka oo caadiga ah sababo la xiriira xaga caafimaadkooda iyo kaalmada goonida ah oo ay u baahanyihiin awgeed.
Camp Odayin waa shirkad aan loogu talo galin in laga taajiro (non-profit) oo shaqadeedu tahay inay siiso dhalinyarada noocaan ah kaam degenaansho leh waqtiga samarka. Waxaanu ku qabanaa waqooyiga Minnesota laba isutag oo midkiiba socdo 5 maalmood looguna talogalay caruurta da’doodu u dhexeyso 8-17 sano. Waxana kaloo St. Paul ku qabanaa isutag socda hal maalin oo loogu talogalay caruurta da’doodu u dhexeysa 6-7 sano. Shaqaalahayaga oo ka kooban 50 qof ayna kamid yihiin madaxda (Executive Director, Assistant Director, Program Director, Medical Director, Nursing Director, pediatric cardiologists, cardiac nurses and highly trained counselors) kuli waxay ku shaqeeyaan iskaa wax u qabso oo lacag laguma siiyo.
Hadaanu nahay Camp Odayin, waxaan xoogga saaraynaa sidii aan meesha uga saari lahayn qarashka iyo xoogga loo baahanyahay si caruurta wadnaha ka jirani ay u heli lahaayeen meel ay kaam ahaan u tagaan oo loogu talogalay. Qarashka ku baxaya $25 kaliya oo is qorida loogu talo galay.
Qofka laaga qorayo Camp Odayin waa inuu wadnaha ka jiranyahay isla amrkaasna ay wax kala garanayaan ama u dhow yihiin heer wax kala garasho, kuna hadli karaan luqada Ingiriiska. Meesh oo yar daraadeed, dadka waxaa loo kala hor aqbalayaa sida loo soo kala horeeyey. Shaqaalaha xafiiska kaamka ayaa soo wacaya waaridka marka qofka la aqbalo.
Hadii aad xiiseyneyso Camp Odayinaad iska qortid, fadlan buuxi foomka ka hooseeya “Camper Registration”. Xafiiska kaamku wuxuu aqbali karaa arjiyada ku qoran luqada Ingiriiska oo kaliya. Haddii aad qabtid suaalo kale fadlan la xiriir Camp Odayin teleefonada (651) 351 9185. Markaad wacayso Camp Odayin fadlan ha kula joogo qof Ingiriis ku hadla.
Waad ku mahadsantahay xiisaha aad u qabto Camp Odayin!